Fiposahan'ny masoandro sy ny filentehan'ny masoandro (tsindrimandry ho an'ny maraina sy hariva) - Quotes
Isan'andro ary isan'andro isika dia mahazo tsodrano eto ambonin'ny tany dia manomboka amin'ny iray. Mety mbola tsy nifoha isika, ary indraindray takona azy tsy hitan'ny rahona, saingy eo ihany izany.
Ny fiposahan'ny masoandro dia iray amin'ireo fahitana mahatalanjona indrindra azontsika jerena. Ny hatsarany dia hery matanjaka, iray izay afaka manome ny hafanany amin'ireo fanahy mafy fo indrindra. izany mitaona , manome hery, manavao, manome fanantenana.
Ary izany no antony itenenana fatratra amin'ny fiposahan'ny masoandro. Manasongadina ireo fahafaha-misy misy ho antsika izany raha toa ka tokony hanatratra izany isika.
Mampahatsiahy antsika izany fa mandroso hatrany ny fotoana ary tsy miova ny fiainana.
Ny fiposahan'ny masoandro dia mametraka amin'ny fomba fijery ny olana mahazo antsika. Na manao ahoana na manao ahoana maizina ny fiainanao ankehitriny, misy fiposahan'ny masoandro miandry anao eo amin'ny faravodilanitra manokana.
Sunrise dia miteny fiteny izay tsy misy teny afaka mandika na manao ny rariny. Nefa maro no nanandrana.
Ireto misy teny nalaina avy amin'ny fiposahan'ny masoandro tsara indrindra mba hampifaliana anao.
Tsy nisy mihitsy alina na olana mety handresy ny fiposahan'ny masoandro na ny fanantenana. - Bernard Williams
Aj style vs shinsuke nakamura
Ny fantatro tsara dia ny fiposahan'ny masoandro rehetra dia toy ny pejy vaovao, fotoana iray hanitsiana ny tenantsika ary handray isan'andro amin'ny voninahiny rehetra. Mahagaga ny isan'andro. - Oprah Winfrey
Mila ampahatsiahivina isika indraindray fa ny fiposahan'ny masoandro dia maharitra fa minitra vitsy. Fa ny hatsarany dia afaka mirehitra ao am-pontsika mandrakizay. - R. A. Salvatore
Fiainana. Androany maraina ny masoandro no nahatonga ahy hitsaoka azy. Izy io dia tao ambadiky ny hazo kesika mitete, ny famirapiratan'ny atsinanana, volomboasary sy jaky mena, zavamananaina, raozy sy paoma iray, ao anaty fitambarana paradisa tena izy sy isan'andro. - Juan Ramón Jiménez
Miposaka tsara ny masoandro. Tsy hitako hoe maninona ny fahafatesana no tsy tokony ho faty lehibe kokoa. - Vladimir Nabokov
Rehefa mieritreritra an'io fiposahan'ny masoandro io aho nifoha tamin'io maraina io, dia nahatsapa ho toy ny nanakaiky ny toerana tsy azoko natao fotsiny aho, ary hitako fa toerana be lavitra noho ny toerana rehetra izay efa ela ahy io. - Hank Green
Niposaka indray ny masoandroko. - Robert Browning
Ny tara-masoandro rehetra dia tononkalo voasoratra ety an-tany miaraka amin'ny teny mazava sy hafanana ary fitiavana. - Debasish Mridha
Ny fiposahan'ny masoandro rehetra dia fanasana ho antsika hitsangana sy hanazava ny andron'ny olona iray. - Jhiess Krieg
Ry fanahy malahelo, mandraisa fampiononana, ary aza manadino
Mbola tsy nahomby tamintsika io fiposahan'ny masoandro io.– Celia Thaxter
Ny fahagagana amin'ny fiposahan'ny masoandro ihany no azontsika fantarina raha efa niandry tao anaty haizina isika. - Sapna Reddy
Misy hatrany ny làlana ary manantena foana amin'ny fiposahan'ny masoandro manaraka, ary amin'ny segondra manaraka, ary amin'ny minitra manaraka. - Ziggy Marley
Mandria fa aza miala. Na ny masoandro aza dia misy ody milentika isan-kariva. Fa miakatra foana ny ampitso maraina. Amin'ny fiposahan'ny masoandro dia ateraka indray ny fanahy rehetra. - Muhammad Ali
Misy ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehan'ny masoandro isan'andro, ary afaka izy ireo. Aza adino ny maro amin'izy ireo. - Jo Walton
Isaky ny mahita filentehan'ny masoandro na fiposahan'ny masoandro mahafinaritra aho, dia mila mikintona ny tenako satria tsy mino aho fa mifoha ary tsy manonofy. - Anthony T. Hincks
Ny masoandro miposaka rehetra dia fitahiana, fotoana iray hianarana zava-baovao sy hamoronana zavatra mety hahasoa ny hafa. Manome fotoana hanonerana ihany koa izy io. Ampiasao tsara alohan'ny filentehan'ny masoandro. - Euginia Herlihy
Ny maizina aorian'ny filentehan'ny masoandro dia tsy maizina velively ka afaka manova ny tsy azo ihodivirana amin'ny fiposahan'ny masoandro. - Craig D. Lounsbrough
Mivoaka any ivelany. Jereo ny fiposahan'ny masoandro. Jereo ny filentehan'ny masoandro. Manao ahoana ny fahatsapanao izany? Mampahatsiaro anao ho lehibe ve ianao? Satria misy zavatra tsara amin'ny fahatsapana roa. - Amy Grant
inona no ilaina amin'ny fiainana
Ny fiposahan'ny masoandro dia toa mahavariana amin'ny natiora ny fiposahan'ny masoandro dia toa mahatalanjona amin'ny sary ny fiposahan'ny masoandro dia toa mahatalanjona amin'ny nofinofintsika Ny fiposahan'ny masoandro dia toa mahatalanjona amin'ny sary hosodoko, satria tena mahavariana! - Mehmet Murat ildan
Ny fiposahan'ny masoandro rehetra dia manome anao fiandohana vaovao sy fiafarana vaovao. Avelao ity maraina ity ho fiandohan'ny fifandraisana tsara kokoa ary fiafarana vaovao amin'ny fahatsiarovana ratsy. Fotoana iray ahafahana mankafy fiainana, miaina malalaka, mieritreritra ary mitia. Mankasitraka an'ity andro mahafinaritra ity. - Norton Juster
Ny filentehan'ny masoandro koa dia fiposahan'ny masoandro. Miankina amin'ny toerana hijoroanao izany. - Karl Schmidt
Misy tantara foana. Tantara daholo izany, marina. Ny masoandro miposaka isan'andro dia tantara. Ny zava-drehetra dia misy tantara ao. Ovao ny tantara, ovao izao tontolo izao. - Terry Pratchett
Ny lanitra dia mitafy volomboasary volomboasary mandritra ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehany, ny loko manome fanantenana anao fa hiposaka ihany ny masoandro. - Ram Charan
raiki-pitia amin'ny lehilahy manambady manonona
Miakatra amin'ny havoana vitsivitsy amin'ny fiposahan'ny masoandro. Mila fomba fijery indray mandeha ny olona rehetra, dia ho hitanao eo izany. - Robb Sagendorph
Ny fiposahan'ny masoandro dia mitazona toky bebe kokoa, ary ny filentehan'ny masoandro dia milamina kokoa. - Anonyme
Sarobidy tokoa ny mijery azy
Ny hazakazaka lava fahazavana voalohany amin'ny fiakarana
Tondraho volamena ny atsinanana mangetaheta rehetra.– James Russell Lowell
Ny masoandro dia namadika ny masoandro atsinanana rehetra ho fiposahan'ny masoandro. - Clément an'i Alexandria
Amin'ny takariva maraina, miandry ny fiposahan'ny masoandro ny fiainana rehetra. Tsy maintsy miposaka ny masoandro hilentika ny haizina! - Mehmet Murat Ildan
Isan'andro dia fahagagana an-tapitrisany no manomboka amin'ny fiposahan'ny masoandro! - Eric Jerome Dickey
Amin'ny fiposahan'ny masoandro dia mamirapiratra ny zava-drehetra nefa tsy mazava. - Norman Maclean
Amin'ny manaraka ny fiposahan'ny masoandro ny fofonao na ny vonin'ny voninkazo dia mamela anao tsy hiteny intsony, mijanona ho toy izany. Aza miteny na inona na inona ary mihaino rehefa mibitsibitsika ny lanitra, tianao ve izany? Ho anao irery no nataoko. - Max Lucado
Amin'izao fotoana manjary maizina ny zava-drehetra, ny filentehan'ny masoandro eo alohantsika no lasa tantara manontolo. Fa raha mahita fahasahiana ampy hiandrasana rahampitso maraina isika, dia ho tonga tampoka amintsika hahatakatra fa raha ny tena izy dia ny antsasaky ny masoandro mody ny antsasaky ny tantara fotsiny. - Craig D. Lounsbrough
Ny maizina no lalina indrindra. Talohan'ny fiposahan'ny masoandro. - Voltaire
Ny fiposahan'ny masoandro na ny filentehan'ny masoandro dia mety hirehitra miaraka amin'ny famirapiratana ary hanaitra ny filana rehetra, ny faniriana rehetra, amin'ny fanahin'ny olona mijery. - Mary Balogh
Isika mpirenireny, mitady ny lalana mitokana hatrany, tsy manomboka andro iray izay nifaranantsika andro iray hafa ary tsy nisy fiposahan'ny masoandro nahita antsika nandao antsika ny filentehan'ny masoandro. - Khalil Gibran
ahoana no itokisanao ny olona nandainga taminao?
Ny masoandro miposaka dia mandoko ny lanitra amin'ny mavokely ary ny filentehan'ny masoandro amin'ny paiso. Mangatsiaka mafana. Toy izany koa ny fandrosoana hatramin'ny fahazazana ka hatramin'ny fahanterana. - Vera Nazarian
Na dia manarona haizina an'izao tontolo izao aza ianao dia tsy azonao atao ny manakana ny masoandro tsy hiposaka. - Debasish Mridha
Hiposaka ny masoandro ary hilentika na eo aza izany. Anjarantsika ny misafidy ny hatao amin'ny hazavana raha mbola eto izy. Fitsangatsanganana. - Alexandra Elle
Tiako ny hahitan'ny tsirairay ny fiposahan'ny masoandro ka hoentin'ny fahagagana avy aminy, noforonina isa-maraina izao tontolo izao. - Mordicai Gerstein
Isaky ny fiposahan'ny masoandro dia miala amin'ny ahiahy amin'ny alina aho ary miarahaba ilay vaovao
andron'ny delestazy sarobidy indrindra. - Czeslaw Milosz
inona no hatao raha tratra manambaka
tsapako fa tsy tia ahy ny vadiko
shane mcmahon sisa velona andiany 2016